Ogaden News Agency (ONA) – Shirgudoonki Shirka Somaliya ee lagu qabtay London, Raisal Wasaare David Cameron oo Kabaxay 7dii Daqiiqo ee Qudbadi Males Zenawi.
*Zenawi oo aad uga xumaaday in Ra’isalwasaaraha UK kabaxay qudbadiisii markii uu jeedin lahaa. Isaga oo Zenawi lakulmay Wajigabax.
*Jaaliyada Somalida Ogadeniya oo ka gaabsatay inay ku hormudaharado shirka London maxaa se sababay?
Kulanka Soomaliya ee lagu qabtay wadanka Ingiriiska Ayaa waxa soo aggaasimay Dowlada Ingiriiska oo isugu yeedhay 50 Ergo oo ka kala yimid Dowladaha Caalamka. Waxaana shirkaas kasoo qeybgalay Ra’isal Wasaaraha wadanka Ethiopia Kaligii Taliye Malis Zenawi oo ka ahaa marti shirkaas wajigiisuna aad u xummaa. Shirkan oo uu hoggaaminayay Ra’isal wasaaraha wadanka UK Mudane David Cameron ayaa shirka kusoo dhaweynayay wufuudi shirkaas ka hadlaysay. Markii looyeedhay Raisal Wasaaraha wadanka Ethiopia KT Zenawi ayaa waxa shirka ka maqnaa David Cameron oo doortay innuu ka baxo oo uusan dhageysan qudbadi Ra’isal Wasaaraha Wadanka Ethiopia Kaligii Taliye Zenawi. Waxaana halkaas wajigiisa ay ka muuqatay cadho badan Kaligii taliye Zenawi markii uu arkay in Shirgudoonki shirka David Cameron u baneeyay madashi shirka. Illaa hada lama oga sababta uu Raisal Wasaare David Cameron uga baxay shirka oo uusan u dhageysan 7dii daqiiqo ee uu hadlayay Kaligii Taliye Males Zenawi.
Males Zenawi ayaa laftigiisu sheegay markii uu qudbadiisa bilaabay in David Cameron shirka kamqanyahay markii uu qudbada aqrinayay. Zenawi ayaa sidoo kale aad moodaysay nin Maxkamad Saaran.
Zenawi ayaa ahaan jiray ninka ugu xooga badan ee goobaha Shiararka Somaliya loogu qabto ka goodin jiray, Waxa uuna shirkan ka ahaa maqane jooga oo aan xiiso loo qabin kasoo qeybgalkiisa iyo qudbadiisa. Waqtigii uu jeedinayay hadalka ayaa waxa goobta shirka ka socday sheeko badan. Dadkuna maba aysan dhageysaneyn qudbada Kaligii Taliye Zenawi. Waxaadna arkaysaa maamusayaashi shirka oo ah dad u dhashay wadanka Ingiriiska oo faraha taag taagaya oo isasalamaya oo iska sheekaysanaya kuna ag sheekaysanaya kuraasta ku xigta Kaligi taliye Zanawi iyo kuraasta ka danbeysa intaba marki uu hadlayay.
Qudbadi uu soo jeediyay Zenawi ayaa iyana ay ka muuqatay murugo iyo innuusan ku faraxsaneyn shirka London ee xalka loogu raadinayo dowlad Sidii Somaliya loogu dhisi lahaa. Waxa uuna hadalkiisii kubilaabay oo uu ku xusay in David Cameroon Shirka ka baxay si kumeelgaadh ah. Dadka siyaasada Geeska Afrika darsa ayaa kasoo xiganay inay tahay dhamaadkii ahmiyada Ethiopia ay ka lahaayeen wadamada Ree galbeedku oo iyagu ah kuwa hada si toos ah usoo daakhilay Siyaasada Geeska Afrika.
Jaaliyada Somalida Ogadeniya
Jaaliyada Somalida Ogadeniya ee wadanka UK ayaa warqado badan u gudbisay madaxda Dowlada UK oo ay kaga xogwaramayaan xaaladaha Geeska Afrika iyo mida Dhulka Somalida Ogadeniya waxa ayna cabashooyin badan ka gudbiyeen Ra’isal Wasaaraha Ethiopia KT- Zenawi.
Waxayna dad badan oo kamid ah Jaaliyada Somalida Ogadeniya ee UK ay sheegayaan sababta uu David Cameron u dhageysan waayay qudbada Zenawi inay noqon karto innuusan kufaraxsaneyn Zenawi kadib markii uu aqristay cabashada Jaaliyadaha Somalida Ogadeniya ee Xafiiska Ra’isal Wasaraha UK maalin kasta loo diro.
Jaaliyada Somalida Ogadeniya ee wadanka UK oo lagu yiqiinay inay meel kasta oo Zenawi tago mudaharaad ku hor qabata ayaa shirkan ku mudaharadin. Waxa Masuulka Jaaliyada UK uu noo sheegay inay door bideen inaysan ku hor mudaharadin shirka Somaliya ee London. Zenawi ahmiyad makulahayn shirkan. Waxa aan taageersanahay dolwada Ingiriisku dadaalka ay ku rabto inay ku dhisto dowlad Somaliyeed oo xasiloon. Sidaas awgeed waxa soo dhaweynayna shirkan danaha Somaliyeed lagu eegayay. Waanan ku faraxsanahay in eega Arrimaha Somaliya Beesha Caalamku ka fadhiisatay oo Ethiopia laga soo wareejiyay. Ethiopiana la ogaado inay tahay kuwa dabka shidaya ee Geeska Afrika Xasilooni-darida ka oogaya.
Halkan hoose ka daawo filimka kowaad Furitaanki. Iyo Filimka labaad Qudbadi Zenawi iyo sidu u egyahay.